ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
နေအိမ် → Moto Guzzi →ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပြောက်: Moto Guzzi Norge
အဆိုပါ Moto Guzzi Norge အချို့သောအချိန်များအတွက် Tour စက်ဘီးငါ့အသိအမြင်၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာခဲ့သည်. စျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုဒီကဗျာမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ, ဒါကြောင့်လည်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့တဦးဖြစ်ဖြစ်ပျက် - အပြင်းထန်ဆုံးတဦးလည်းပါလျှင်. သစ်တစ်ခုမော်ဒယ်ဒီအတိတ်တစ်နှစ်ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ Moto Guzzi ထားရန်မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, အဆိုပါ Norge ပင်ယနေ့လူစည်ကား Tour ဈေးကွက်ထဲမှာလျစ်လျူရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပေ.
အများအပြားအီတလီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီကြီးများလိုပဲ, Moto Guzzi ယင်း၏အမွေအနှစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်, နှင့် Norge တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အထူးတဦးတည်းရှိတယ်. ဒါဟာ GT ကို Norge ပြီးနောက်အမည်ရှိ, ကုမ္ပဏီ၏သဲ 1928 မော်ဒယ် - မြောက်ကိုရီးယားဝင်ရိုးစွန်းကျော်ပျံသန်းဖို့ပထမဦးဆုံးသော airship များအတွက်အမည်ရှိသူ့ဟာသူ. အဆိုပါ 500cc GT ကို Norge နော်ဝေရဲ့ Lapland မှကုမ္ပဏီ၏အီတလီရုံးချုပ်ကနေ 4000 မိုင်စမ်းသပ်စီးနင်းပြီးစီး, အာတိတ်စက်ဝိုင်း၏အတွင်းပိုင်းအစွန်းပေါ်.
ဒါဟာကျနော်တို့တောင်မှယနေ့ထားတဲ့မော်ကွန်း Cross-တိုက်ကြီးခရီးအဖြစ်ခွဲခြားချင်ပါတယ်စီးနင်းများ၏ကြင်နာမယ့်, နှင့် 1928 က ပို. ပင်ဒါလမ်းများ၏ပြည်နယ်ပေးထားခဲ့သည်. အဆိုပါကုမ္ပဏီသက်သေပြနေတဲ့အချက်ခဲ့: သူတို့ရဲ့နောက်ဘက် swingarm ရပ်ဆိုင်းမှု setup ကို - က၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံး - အလုပ်, နှင့်မဟုတ်ရင်ခံသာဖြစ်ကြသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေး၏ခရီးကို enable နိုင်. အင်ဂျင်နီယာ Guiseppe Guzzi လေးပတ်အတွင်းခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်း.
အဆိုပါ Norge အတွက်ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာသည့်အခါ 2005, ဒါကြောင့်လေတိုက်-ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း-ဒီဇိုင်းတရားမျှတပြီးခေတ်မီ v-အမွှာအင်ဂျင်နှင့် accoutrements နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာ, နှင့်အလွန်တူညီစီးနင်းပြီးစီး. ရည်ရွယ်ချက်၏ကြေညာချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့သည်, ၎င်း၏ကိစ္စများမပါဘဲမဟုတ်ခဲ့သော်လည်း. တစ်ဦးမသက်မသာထိုင်ခုံ၏အစီရင်ခံစာများ, တုန်ခါမှု-ပျော်ရွှင်လက်ကိုင်ကာအပူအင်ဂျင်တစ်ခုမဟုတ်ရင်အစိုင်အခဲလွှတ်ပေးရန်ပျက်ခြင်း.
အဆိုပါ 2011-2012 ဖြန့်ချိသံသရာတစ်အကြီးအကျယ်ဒီဇိုင်းမော်ဒယ်ဖြန့်ချိမမြင်စဖူး, သစ်တစ်ခု Fair ကာမဂုဏ်, ထိုင်ခုံ, ကုန်ခန်း, panniers, အီလက်ထရောနစ်ချိန်ညှိ screen နှင့်ရှစ်အဆို့ရှင်အင်ဂျင်ကို. အစီရင်ခံစာများအနှိပ်အရ, အထိ 80% ဆိုင်ကယ်၏အသစ်ဖြစ်၏. torque အားဖြင့်တက်ဖြစ် 20% အဟောင်းကိုမော်ဒယ်ပေါ်, တစ်ဦးနှင့်အတူ 7% မြင်းကောင်ရေတိုးလာ.
ကြီးသောတန်ခိုးနှင့်လည်းအကြီးအနှစျသိမျ့လာ; ရပ်ဆိုင်းမှုကိုအပြည့်အချိန်ညှိဖြစ်ပါသည် (နှင့်တစ်ဦး tad နူးညံ) နှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးအားလုံးအကောင့်များက, နှင့်အသစ်သောထိုင်ခုံဟောင်းများ၏ပြဿနာများကို redressed ထားပါတယ်.
အဆိုပါအဆင့်မြှင့်အများကြီးအားကစား-tourers ၏ဟောင်းများကိုနွယ်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့စျေးကွက်အတွက်ဆိုင်ကယ်အဘို့အလိုရှိပါသည်. အဆိုပါ Norge ဟွန်ဒါရဲ့ VFR1200 နှင့်အတူခြေချောင်း-to-ခြေချောင်းသွားကြဖို့အတှကျ Moto Guzzi angling ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါဟာင်, အောင်ပွဲရဲ့ Sprint GT ကိုနှင့်အမျှအရည်အချင်း Tour စက်ဘီးနှစ်ဆသောအခြားလက်တွေ့ကျတဲ့ All-rounders. အဆိုပါ Norge ဆက်ဆက်တစ် tourer ၏အလေးချိန် sports - 257kg မှာလောင်စာဆီမလိုဘဲ, ကအများဆုံးပြိုင်ဖက်သည် သာ. – ဒါပေမယ့်လည်း accessories များအနေနဲ့အထင်ကြီးခင်းကျင်းဂုဏ်ယူ.
အိတ်တစ်ဦးစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ, အပူအိမ်မှာရှိနေတဲ့, ကို ABS နှင့်ဘလူးတုသ်-enabled တွမ်တွမ် GPS စနစ်, ယင်းအစားနာကျင်-ရှာဖွေနေ£ 11.549 စျေးနှုန်းဒါမကောင်းတဲ့မထင်ထားဘူး. ဤသည် BMW ကားရဲ့မြင့်မားတဲ့နည်းပညာများနှင့်မြင့်မားသောစျေးနှုန်း R1200RT နဲ့အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့နှိုင်းယှဉ်စေသည်. အဆိုပါ Norge ထက်အပြည့်အဝ 24kg ပေါ့ပါးသော်လည်း, ယင်း BMW ကားလည်းတထောင်ပေါင်ပို – နှင့်အပူအိမ်မှာရှိနေတဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ် GPS စနစ်မရှိဘဲဖွင့်.
ဒီကပြောကြားခဲ့သည်နှင့်အတူ, ငါစစ်မှန်သော All-rounder အဖြစ် Norge အကြောင်းကိုအလေးအနက်သံသယ feeling မကူညီနိုငျ. အဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလေးချိန်နှင့်အသစ်ထိုင်ခုံအနေအထား - မွငျ့မားအကြားတစ်ဦးစိတ်မသက်သာအပေးအယူ, ပြိုင်ကားဆန်သောတံစို့နှင့်ဖြောင့်မတ်လက်ကိုင် - အသွားအလာမှတဆင့်ယက်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပါလျှင်သင်၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်တဲ့တထောင်သည်အခြားစက်ဘီးရှိပါတယ်ဆိုလို. သူကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, သငျသညျအထကျကကိုင်တွယ်ရန်လက်မောင်းအစှမျးသတ်တိနှငျ့မျက်နှာသာ Tour ရှိပါက, ပျော်စရာများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မှသစ်ကို Norge ရဲ့အနည်းငယ်မျှသာ nods သင့်ရဲ့ရှည်လျားစီးနင်းတဲ့ purebred tourer ပေးရန်ပျက်ကွက်စေခြင်းငှါ, အပိုခံစားချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ.
အဆိုပါ Norge ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ attribute တွေ၏အရှိဆုံးအောင်မှနောက်ဆုံးလှည့်ကွက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေါ့, ပိုက်ဆံ - သင်တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိထက်ကနှင့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီး. အဆိုပါ 2012 ထုတ်ဝေကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲခံထားပါတယ်, လူအပေါင်းတို့သည်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ကြောင်းနှင့် "သစ်ကိုစက်ဘီး" ပရီမီယံဖြောင့်မတ်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွား. အဟောင်း Norge သင်က၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဆိုင်ကယ်ကြုံနေရကြသည်မဟုတ်ကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အသိပညာဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်နုတ်ထွက်ပေးဖို့ပါလိမ့်မယ်ဝယ်ဖို့.
ဤသည်မှာပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေါ့, နှင့်အမှန်ပင်သင်တထောင်ငါးတို့အကြားခုနစ်ပေါင်ငါးနှစ်ကျော်ဟောင်းမော်ဒယ်များရှာတှေ့နိုငျ. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, သူတို့အထက်စွလေ့ကြဘူး 20,000 မိုင်, 10000-ခိုင်မာတဲ့ odometers ဘုံမျက်မှောက်နှင့်အတူ. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအတော်လေးအဖြစ်အံ့မခန်းနှင့်ပွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သငျတို့သမဆိုအမှု၌ 6,250 မိုင်ဝန်ဆောင်မှုကြားကာလအတွက်ဘတ်ဂျက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
အသစ် Norge တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အမှန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လက်တွေ့ကျတစျခု. တစ်ဦးတည်းသုတေသန၏အခြေခံတွင်, ဘယ်လောက်မြင့်မားငါအကြံပြုကြောင့်သင်သည်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်ဝက်ဥရောပတစ်လွှားဘယ်နေရာမှာအလယ်၌တစ်ဦးဦး-အလှည့်လှည့်ပတ်က hauling အရိုးစုကိုဘယ်လောက်မှကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဆင်းလာ. ထိုသို့စမ်းသပ်ဖြတ်သန်းခဲ့လျှင်, ဒါကြောင့်ပဲခမ်းနား Tour စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးအပေးအယူတဦးကယနေ့ဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
အရှိန်သတ် – V700, V7 အထူး, သံအမတ်ကြီး, 850 GT ကို, 850 GT ကိုကယ်လီဖိုးနီးယား, Eldorado…
2008 BMW ကား R1200GS vs. 2008 Moto Guzzi Stelvio 1200 4V ကို- နှိုင်းယှဉ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း
စက်ဘီးကိုယ်ရေးဖိုင်: Moto Guzzi V7 ပြိုင်ကားသမား-သတင်းများ & reviews-မော်တော်ဆိုင်ကယ် Trader
Moto Guzzi ကလပ် GB အထိ
Moto Guzzi နော်ဝေအားကစား Tours
အမျိုးအစားMoto Guzzi »
အမျိုးအစား၏အခြားဆောင်းပါးများ "Moto Guzzi":
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Guzzi V7 Classic (2010) ပြန်လည်သုံးသပ်
Moto Guzzi ကနေနယူးထုတ်ကုန်, အတွက် Vespa နှင့် Aprilia ...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Guzzi ကနေနယူးထုတ်ကုန်, Vespa နှင့် Aprilia Eicma မှာမိတ်ဆက် …
အဆိုပါစပျစ်သီးမီးသတ် Guzzi V7 750 “အလွန်အထူး & ...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် အဆိုပါစပျစ်သီးမီးသတ် Guzzi V7 750 “အလွန်အထူး” DocuBlog Life's ဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်…
စုံတွဲတစ်တွဲအလင်းများ CEV ဘေးထွက် Arrow Guzzi Ercole ဧရ ...
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် စုံတွဲတစ်တွဲအလင်းများ CEV ဘေးထွက် Guzzi Hercules Ercolino Tricar အခန်း arrow…
Moto Guzzi ကလပ်ပိုလန်: ဒါဟာရတုခဲ့သည် – M က ...
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Guzzi ကလပ်ပိုလန်: ဒါဟာရတုခဲ့သည် – Moto Guzzi ကမ္ဘာ့ဖလားကလပ်
Moto Guzzi Daytona ဆိုင်ကယ်အပတ်ဆိုင်ကယ်ထဲသို့အမြန်နှုန်း ...
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Guzzi ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ Daytona ဆိုင်ကယ်အပတ်ဆိုင်ကယ်သတင်းထဲသို့အမြန်နှုန်း
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Moto Guzzi Norge 1200 – စမ်းသပ်ခြင်း Drives – 2008 Moto-Guzzi Tours – အစဉ်အဆက်…
Moto Guzzi Le Mans – ဝီကီပီးဒီးယား, အခမဲ့ ENC ...
18.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Moto Guzzi Le Mans – ဝီကီပီးဒီးယား, အခမဲ့စွယ်စုံကျမ်း
တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Brammo Enertia Bajaj Discover Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Aprilia Mana 850 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati Diavel အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ DN-01 Ducati 60 ဆူဇူကီး AN 650 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n စမတ် eScooter ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati Desmosedici GP11